Espaniola sy Angletera dia hanadihady ihany koa ny fanangonana tahiry WhatsApp | Vaovao momba ny gadget
Espaniola sy Angletera dia hanadihady ihany koa ny fanangonana tahiry WhatsApp
Mandritra ny herinandro iray ary aorian'ny fanavaozana farany ny WhatsApp dia terena ny mpampiasa rehetra ekeo ireo teny hahafahana manohy mampiasa ny fampiharana fandefasan-kafatra napetraka amin'ny fitaovana maherin'ny iray tapitrisa. Ireo teny vaovao ireo dia mangataka fahazoan-dàlana hizara ny mombamomba ny kaontinay amin'ny Facebook mba "hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa anay." Raha tena te hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa ianao dia atombohy ny manampy ireo fampiasa rehetra izay hita ao amin'ny Telegram ohatra ary mandraka androany dia mbola tsy nahatratra WhatsApp.
Ny governemanta alemana no firenena voalohany nitaraina mafy hoe nanery ny orinasa hampiato ny fanangonana data avy amin'ireo mpampiasa WhatsApp ary hamafa ny vaovao rehetra fa efa azony hatreto. Saingy tsy izy ireo irery no firenena mila miasa mba hijery marina izay mitranga amin'ny angon-drakitra. Espaniola sy Angletera dia nikasa ihany koa hanadihady ireo orinasa roa ireo, izay ao anatin'ny vondrona iray ihany.
Ny Agence Espaniôla momba ny fiarovana angon-drakitra dia te hahafantatra tsara ny fomba, orinasa tsy mitovy na dia ao anatin'ny vondrona iray aza, ny fampahalalana dia afindra amin'ny orinasa iray mankany amin'ny iray hafa ary zahao raha voahaja ny lalàna Espaniola amin'io lafiny io. Amin'izao fotoana izao, raha te hanohy hampiasa ny rindranasa izahay dia tsy maintsy manaiky ireo fepetra vaovao, eny na eny, satria raha tsy izany dia tsy hamela antsika hanao hetsika hafa ny fampiharana.
Maro ireo mpampiasa izay manomboka mampiasa fampiharana fandefasan-kafatra hafa hitsahatra amin'ny fampiasana WhatsApp amin'ny farany, satria tsy nahatanteraka izay nampanantenainy i Mark Zuckerberg rehefa nanambara ny fividianana ny sehatra fandefasan-kafatra izay nambarany fa ny data-n'ny mpampiasa dia tsy hampiasaina amin'ny tanjona ara-barotra na dokam-barotra mihitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Espaniola sy Angletera dia hanadihady ihany koa ny fanangonana tahiry WhatsApp
Hatraiza ny habaka tena izy atolotry ny Google Pixel 32 GB ho antsika?
Zavatra 6 adinon'ny Google ao amin'ny Google Pixel ary mamadika azy ho mediocrity